U-Saint Jude Thaddeus «Umthandazo» 【【UMxhasi wezizathu eziNtshiseko】
Ngokuqinisekileyo ukwazi uyibuza njani into kuSan Judas Tadeo Kubalulekile ukuba uqale wazi ezinye iinyani malunga nobomi balowo uye waba ngomnye wabaPostile abathandekayo eBhayibhileni.
Ayilolize, umthandazo kwimithandazo yakhe yokuthanda, iimeko ezinzima kunye nokusebenza, kusebenza njengentuthuzelo kwinani lakhe elihlala likhula lokuthembeka. Indoda ehloniphekileyo, enobulungisa kwaye enobubele ekugalelwe kuyo imilambo ye-inki.
I-San Judas Tadeo ayisiyiyo kuphela ingcwele ebuzwa kwiimeko ezinxunguphalo, baninzi abanye. Ukuba ufuna ukwazi ukuba kutheni la manani ecawa ethandazelwa, unokufumana ulwazi oluthe kratya.
1 Ngubani uSan Judas Tadeo
2 Wawunjani umsebenzi ka "El Trinomio"
3 Yeyiphi imimangaliso eyenziwa ngumxhasi wezinto ezingenakwenzeka
4 Indlela yokuthandaza kuSanta Judies
4.1 Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus wamatyala anzima naxakileyo (umthandazo wamaKatolika)
4.2 Ividiyo ngomthandazo ku-Saint Jude Thaddeus ngommangaliso ongenakwenzeka:
Ngubani uSan Judas Tadeo
Baninzi abantu abathandaza kuye kodwa bambalwa abaziyo ukuba ngubani uJudas Tadeo. Ungamangaliswa yinto yokuba le sijongana nayo ibingomnye wabafundi bakaYesu waseNazarete ngubani kwiVangeli wayebizwa ngokuba ngumntakwabo Yesu, ngokulula nguTadeo okanye uJudas de Santiago. Oku kuzalwe kumda womda phakathi kweAsia neYurophu. Imeko efanayo yeSan Chárbel, onokwazi ngayo yonke into ekuyo https://descubrir.online/, San Cipriano, apho unokufumana khona Funda ngokugqithisileyo, kwaye ISan Pancracio.
Njengokuba onke la magama ayembalwa, iSan Jerónimo de Estridón yayibiza ngokuba yi "El Trinomio", oko kukuthi, "ngamagama amathathu". Khumbula ukuba igama elithi Yudas lithetha "ukudumisa makunikwe uThixo" kwaye ukwabizwa ngegama "San Juditas Tadeo".
Lo ungcwele wayehlobene noYesu Kristu ngenxa yobudlelwane bakhe noSan Joaquín noSanta Ana, abazali beNtombikazi kaMariya. Uyise igama lakhe nguCleopas kunye nonina uMariya, namesake kunye nesihlobo esisondeleyo sikamama kaYesu. Ke, wayengumtshana kaJosé noMaría kwaye, ke, umzala kaYesu Krestu. Omnye wabantakwabo yayinguSantiago Omncinci.
Umhlobo kaYesu ngexesha lokufikisa kunye nobutsha bakhe, xa owokugqibela eqala ubomi bakhe esidlangalaleni, uThadede, owaqala ukubizwa njalo ukuba amhlukanise noJudas Iskariyoti, washiya yonke into ukuze amlandele.
Njengomdla, sifuna ukubonisa ukuba xa uYesu Krestu, emva kwesidlo sangokuhlwa sokugqibela, ethembisile ukuba uzakuzibonakalisa kwabo bazokumphulaphula, uJudas waseSantiago wambuza ukuba kutheni engazibonakalisi kuye wonke umntu, njengophawu lobuntununtunu obukhulu obaphawula le ngcwele . U-Kristu waphendula esithi, uYise noYe kwaye uyakubandwendwela bonke abo bamthandayo. "Siza kuza kuye, sihlale kuye." (UYohane, 14, 22-23).
Wawunjani umsebenzi ka "El Trinomio"
Umonde kunye nomgcini we-agronomist owayezelwe eKhana yaseGalili, wawushiya umsebenzi wakhe Joyina umkhosi kaMesiya wabafundi, Akabi kuphela ngomnye wabaPostile beNkosi kodwa wayengoyena mshumayeli ubalaseleyo nowoyikekayo kwimfundiso yakhe.
Imimandla yaseGalili, kwelakwaYuda, e-Egypt, e-Asiya, e-Ewufrathe, e-Tigris, e-Samariya, e-Libya, e-Edessa nase-Bhabhiloni, yayizezinye zeendawo ezinethamsanqa apho u-Thaddeus wayedlulisa umyalezo wobumesiya, nowaphela nasePersi nase-Syria.
Ukusasazwa kwalo myalezo kwakungeyiyo into enokuchazwa njengoxolo, kuba yayihamba kwezi ndawo sele zikhankanyiwe watshutshiswa ngenkohlakalo. Nangona kunjalo, akukho xesha apho uxinzelelo olunje lwamenza ukuba anikezele ngemizamo yakhe. Ngaphezu koko, imimangaliso yakhe yanda kwaye, ngenxa yeempawu zakhe ezintle, abantu baguqula baba ngamakristu baba ngamakhulu, kubandakanya noKumkani Abab waseBhabheli.
Ehamba nomntakwabo uSimón, wahamba ngeendlela ezingenakubalwa, efika ePersia, indawo ebonakaliswa ngokuhlasela ngokuqatha ngokuziphatha kunye nokuziphatha kobuKristu. Akunakuphikwa ukufaneleka kwakhe aguqule ikhulu lamawaka labemi bendawo enobutshaba, beshumayela kwaye belungisa imikhwa emibi neempazamo zabo, bababhaptiza, beqinisekisa kwaye betshata.
Izenzo zabo zabangela ukuba abanquli-zithixo batyhafile, bekhathazekile ngenxa yokuphulukana nokuthembeka kwabo, ukuba baqhubele phambili kuhambo lwabo oluya kwisixeko esilandelayo, eSuamir, apho batyhefa iindlebe zabantu ngeendaba ezingezizo malunga nokufika okulandelayo kwe Abaphambukeli ababini ababeza kugwetyelwa ukufa, kuba babeluphelisa unqulo loothixo.
Ukufika kwabo bobabini abaPostile, babuliswa ngesikhalo esibi, babanjwa baphathwa gadalala ngaphandle kwenceba, babakhokelela kwitempile eyayimiselwe ukunqula iLanga kunye Inyanga. Washiywa kwindawo engcwele kwaye wabotshelelwa ngamatyathanga kwada kwasa ngengomso, xa bagwetyelwa ukufa, kwathiwa uSimón wabulawa ngesando entloko okanye wasikwa kubini ngehandsaw.
Kubonakala ngathi, ngelixa babethuthunjiswa, uThadede wakwazi ukujonga emehlweni kaSimon esithi "Mzalwana, ndiyayibona iNkosi yethu uYesu Krestu isibiza", nto leyo ebangele elinye iliza lokuvuthuza kwimizimba esele inegazi labaPostile.
Ewe wafa njani uSan Judas Tadeo, impendulo kukuba wanqunyulwa intloko ngezembe, yiyo loo nto ngamanye amaxesha umfanekiso wakhe uboniswa nesinye sezi zixhobo ziphathwayo.
Yeyiphi imimangaliso eyenziwa ngumxhasi wezinto ezingenakwenzeka
UThaddeus ukwabizwa ngokuba "ngumphathi wezinto ezingenakwenzeka", kuba uSaint Brígida oyimfihlakalo wabhala ukuba uYesu wacebisa ngenye imini ukuba nanini na xa efuna ukufumana amalungelo athile, kufuneka awacele ngcwele. Ngesi sizathu yabelana ngolu hlobo kunye noSanta Rita de Casia.
Ukwaziwa kwakhe ngokungummangaliso kwandulela yena, ukuya kwinqanaba lokuyibeka kwinqanaba lokuthandwa kwabangcwele, kubhiyozelwa ngomhla weSan Judas Tadeo nge-28 ka-Okthobha. Ukuzinikezela kwakhe ebomini kuyamvumela njengobathobekileyo nothando nabo bonke abo bamcelayo ukuba abanike ummangaliso.
Ebizwa nguYesu ngokwakhe njengo "Umphilisi", Ukuqonda ubuntu bakhe obunemfesane, obunothando kwaye uhlala ekulungele ukuphatha izinto ezingenakwenzeka okanye ezilahlekileyo, ukusukela ngoko uye wathandazelwa kunye neminikelo eyenziweyo kuye.
Bakhe ukuphilisa imimangaliso yabantu abagula kakhulu okanye abangenathemba baye bajikeleza umhlaba Ikwangumntu ophambili kwezi ngozi apho umntu othile kuye kwabikwa ukuba ulahlekile.
Ngokukodwa, ukuthandazela kwakhe kuqinisekisiwe kwiziganeko ezahlukeneyo zezonyango, isisombululo sothuse amaqela ezonyango angenelele kuzo, engafumani ngcaciso yenzululwazi ngezibonelelo zawo.
Ngokunjalo, uthando luyinjini kunye nokuzola kubantu abaninzi abahlala ngenjongo yokuthanda abanye. Ongcwele uYuda Umlamli owahlukileyo ekumiseni ikhonkco elingcwele phakathi kwezinto ezimbini nangaphezulu. Ungaya kuye bobabini ukuze ubuyise uthando oluphulukene nosapho, kwisibini okanye ekugqibeleni udibane naloo mntu unqwenelekayo kwaye ulungele.
Nangona kubonakala ngathi le ngcwele ayichazwanga ngokubaluleka ekufanele ukuba iyenze kwimicimbi yothando, mininzi imimangaliso eyenziweyo nguye egameni lentliziyo.
Indlela yokuthandaza kuSanta Judies
Indlela echanekileyo yokubuza lo mntu ungcwele ngento oyifunayo ngumthandazo. Lowo unamatyala anzima naxakekileyo unakho ukunceda kwaye ukukhokele kwelona xesha linzima kwaye ivela kwisityhilelo esikhankanywe ngaphambili ukuya eSanta Brígida.
Umthandazo ku-Saint Jude Thaddeus wamatyala anzima naxakileyo (umthandazo wamaKatolika)
“U-Saint Jude Thaddeus, umpostile nomxhasi wamatyala anzima naxakileyo,
Ukukhanya kwakho kukhanya kwaye kukhanya esibingelelweni,
Ubukho bakho obubalaseleyo nobomoya,
Ufikelela kwezona ntliziyo zixhelekileyo kwaye ubanike uxolo lwengqondo,
Awubakhanyeli abo ubathandayo ukuba ubenzele inceba okanye ucele,
Iintshaba zakho ezingcwele ziyasiva isikhalo sethu.
Ndicela ubukho bakho ngeli xesha,
Namhlanje ndiziva ndiphelelwe lithemba kwaye ndizele lusizi,
Ndiyakucela ukuba uthobele eli khwelo,
Intliziyo yam iyangcangcazela kwaye ndiyiva ibetha
Ubumnyama buwugubungela umphefumlo wam,
Kwaye intlungu yam iyandikhathaza
Mamela kum nceda.
Ndenzele inceba, yiba nenceba
Uhambe noYesu iindlela zentlungu,
Wakuqhuba ukushumayela ilizwi lakhe ngomlomo wakho,
Ufundise okona kukhanya kubuthathaka ngokomoya,
Ngaphandle kokuthandabuza yonke imvu uyibeka,
Ugcine abo bangalunganga
Ukuhamba phezu kwamatye e-cobblestones,
Ngamatye esono kunye nenyaniso emnyama,
Ukubakhokelela kwindlela elungileyo,
Umendo wasezulwini nobuthixo.
Isicelo sam masize kuye,
Ukusukela namhlanje ndizivakalisa ukuba uthembekile,
Kwaye naphi na apho ndiya khona ndiya kusasaza ukuzinikela kwakho,
Ndiza kuthetha ngobabalo ondinike lona namhla,
Ukwenza icace kubo bonke abantu,
Ukuba ukholo lwam kuwe aluzange luphoxeke,
Lo mthandazo ukhokelele ekufezekisweni kwe novena ku-Saint Jude Thaddeus ngabazinikeleyo, bebonakalisa ukholo lwabo olunzulu kuye. Ngendlela efanayo, kukho imithandazo eyahlukeneyo yeSan Juditas apho ungenelelo lwakhe lwaphezulu lucelwa phambi kukaKristu, phakathi kwayo:
Ukuthandazela umsebenzi. Enye yezona zisetyenziswa kakhulu phakathi kwamaKristu kunye namakholwa, esetyenziswa nangubani na oceba ukunika uzinzo kwezoqoqosho kusapho lwabo
Umthandazo wothando nokuphilisa. Omnye umthandazo onamandla osebenza njengesikhokelo kwezona meko zinzima ebomini okanye xa imicimbi yokuziva ubeka intloko ibuhlungu
Ividiyo ngomthandazo ku-Saint Jude Thaddeus ngommangaliso ongenakwenzeka: